Ngo imvelo Turtle ophoqelelwe yena ukuthola zondliwe, kodwa ekuthunjweni ke kumele anakekele umnikazi. Uma uyazi ukuthi ukondla ufudu ixhaphozi, ngeke kube nobunzima kakhulu. Ngokuvamile iba umhlali ekhaya terrarium European Echibini ufudu. Yini ukondla ikhaya elihle, futhi kanjani ukubheka emva ke, kubalulekile ukuba abhekane ngokuphumelelayo nokuphikisana onguchwepheshe. Ngoba akusona ezidingekayo ukudala microclimate okhethekile, ngoba silwane bomdabu esuka eYurophu.
Indlela yokuthola marsh ufudu
European Echibini ufudu (Emys orbicularis) ngokuvamile zitholakala emazweni nge Isimo sezulu esipholile. Awezinyoka kungukuthi ezisengozini yokushabalala, ngakho Encwadi Red akuyona. Lapho okuqukethwe ufudu terrarium ungakwazi ukuphindaphinda ngokugcwele. Ukuze wenze lokhu, kufanele uhlinzeke ukunakekelwa efanele futhi ukwazi ukuthi ukondla marsh izimfudu e ubudala ezahlukene.
ufudu umzimba evikelwe omnqumo amnyama, ngezinye izikhathi cishe black carapace (igobolondo). Ngesikhathi i-marsh European yena ovate-okusaqanda futhi kancane isicaba. Hatchback Carapace enwetshiwe ezingaphezu kuka ngaphambili. Umzimba embozwe izindawo eziningi egqamile aphuzi. Sezilwane ezihuquzelayo kungokwalabo izilwane ezidla ezinye kanye uhlala ngamanzi agobhozayo. Ukuba khona umsila omude kwenza kube lula ukuhambisa emanzini, futhi izimpiko elinamandla izinyawo okuhlukana inyama ufudu lapho kukhiqizwa ukudla. Kodwa ezihuquzelayo musa hlala ezweni amanzi, futhi badinga ezweni. Yingakho izimfudu basonta ekilasini izilwane zasemhlabeni noma izilwane zasemhlabeni.
Kwezinkambiso ufudu yokudla
Naphezu kweqiniso lokuthi ezihuquzelayo yokudla ukhetho, okuphakelayo bog izimfudu ekhaya udinga ukulungisa, uma kubhekwa iminyaka. Baby izimfudu ukuthi ukukhuthalele asathuthuka, wapha kanye ngosuku, kodwa yezinyoni kufanele njalo kube ulwelwe samanje, efanelekayo ukudla. ukudla yeNgxenye siqukethe izingcezu ezimbili noma ezintathu 1 cm 3 izinhlanzi.
Lapho izimbungulu ezikhulayo futhi carapace yabo ifinyelela Usayizi 9-13 cm, zinikelwe inhlanzi ngemva kwezinsuku ezingu-1-2, khona ulwelwe Kuyadingeka. ukudla yeNgxenye siqukethe izingcezu ezimbili noma ezintathu ubukhulu 2-3 cm 3 izinhlanzi.
abantu abadala kufanele abunjwe ukondla izikhathi akukho kuka 2-3 ngesonto. Ukukhonza Usayizi kuyakhethwa kumuntu ngamunye, kuya inani lokudla esetshenziswa amunca ufudu.
Yini Ngidla marsh ufudu
Ngokuthenga isilwane, udinga ukucela umdayisi, ukwedlula ukondla ufudu ixhaphozi, ngoba kuthinta impilo futhi inhlalakahle izilwane zasemhlabeni.
Turtles ukunikeza ukudla okuluhlaza kabani lokushisa kufanele libe seduze lokushisa kwamanzi nomoya ngaphakathi endaweni ebiyelwe.
Sezilwane ezihuquzelayo ukudla evamile ihlukaniswe zamabanga aphansi naphezulu.
1. ukudla main. Kubandakanya imikhiqizo yezilwane. Turtles ngenjabulo ukukuxoxela:
inyama ebomvu zezinhlanzi (haddock, cod, ITILOSI lishayela, perch, Pollock); futhi babele bukhoma noma eqandisiwe hhayi bahlanza (zezinhlobo abasebancane kakhulu akukhetha ukunikeza encane izinhlanzi lonke, kanye nabantu abadala - oqoshiwe zibe nezixhobo ezinkulu noma inhlanzi lonke);
izithako liverwurst: inkukhu kwesibindi kanye inhliziyo noma ithole;
ezinamagobolondo futhi eyisinambuzane: Daphnia ezinamagobolondo, ama-worms, izimbungulu oyi amathebhu bathinteka;
zezinto eziphila emanzini;
ezincelisayo ezincane kanye nezilwane eziphila ezweni.
2. ukudla engaphezulu, okubandakanya ifolishi owomile nemifino. Enough umjovo kanye njalo izinsuku eziyisikhombisa:
Udla eyomile izimfudu;
yemifino okuphakelayo, esakhiwa ulwelwe (amanzi eseshumi, duckweed, piste, hornwort), tonkonarezannyh imifino (izaqathe), izimbali zasendle (clover, dandelion, daisy).
Vitamin izakhiwo kumele inikezwe kuphela ubufakazi wezilwane.
Akunakwenzeka ukunikeza izimfudu
Ngokubonisana umdayisi mayelana nendlela ukondla ufudu ixhaphozi, udinga ukucela ukuthi is contraindicated. Kukhona imikhiqizo awavunyelwe ukondla ezihuquzelayo noma kungenzeka, kodwa eziningi limited:
1. Amandla ezifuywayo amphibian kungenzeka buhlanjululwe ezinye izinhlobo zemikhiqizo, kodwa eziningi limited:
izitshalo aqukethe oskalaty;
strumogennymi izitshalo enesandla ukuntuleka kwe-iodine, lapho isivuno ikhula;
imikhiqizo phosphorus ngokweqile okungadingi amunce i-calcium,
purine futhi ane-alikhali izithasiselo;
izihlahla ezinameva ngezidladla isinambuzane, imikhiqizo okunamafutha;
2. Kungavunyelwe zihlanganisa yokudla:
ikhasi izithelo zohlobo lukalamula, imbewu izithelo kanye berry;
okusemathinini futhi izicupho eyomile ezincelisayo;
ukudla komuntu (wokudla, ushizi, imikhiqizo ebhikawozi, imikhiqizo yobisi, ukudla thermally iphathwa).
Lapho ukudla okukhethwe kahle European Echibini ufudu ukuphila isikhathi eside kunaleso uma ukondla wakhe ongenakulinganisela futhi ayihlelekile. Isilinganiso sobudala ezihuquzelayo abahlala endlini kuyinto iminyaka 60-70, kodwa octogenarian eyaziwa amakhophi.
Ukuze ukwazi ukuthi ukondla marsh ufudu ekhaya akwanele, kumelwe sazi ukuthi ukwenza kahle ke. abalimi abanolwazi baye basungula imithetho elandelayo lapho umnikazi uzokwazi sikanye ezihuquzelayo iminyaka eminingi:
Turtles emibili ubudala kanye nabesifazane abakhulelwe ezidla kanye ngosuku, kanye nabantu abadala - izikhathi 2-3 ngesonto.
The main ukudla - ukudla isilwane. Bog namahobhe asendle carnivores, ngakho inyama kanye nenhlanzi - ukudla zabo eziyinhloko. Omunye akufanele ukondla izimfudu inyama, ke yona le amanzi.
Kuyadingeka ukufundisa izimfudu, ngakho bathatha ukudla nge udlawana. Bayoba zidla, edonsa ezihlekisayo ikhanda ephuma emanzini noma emhlabathini. Kuyadingeka ukuba zithobele isheduli yokudla ke izimfudu ukujwayela mode oyifunayo bese uthole umnikazi.
ukudla imifino isidingo owethulwa kancane kancane, lapho izimfudu zikhule. I terrarium ngezinye izikhathi ukusebenzisa izinhlanzi ezincane ukuze sivuse abafundi umzingeli imizwelo futhi ukubajabulisa.
Ukunika isiphuzo izimfudu akudingeki. Futhi njalo ngemva kwezinsuku 7-10, kuyinto efiselekayo ukulungiselela usuku wokugeza. Kuyadingeka ukuhlanza igobolondo le-plaque kanye indwangu ethambile.
Ukudla kufanele kube i-calcium samanje, engazange okwenzekile imilenze carapace waphuka kwakhiwa ngendlela efanele.
eside European Echibini ufudu emanzini, futhi lokhu kufanele kunakwe lapho okuqukethwe endlini yabo. Terrarium ngoba ezihuquzelayo kufanele bakhethwe ezinkulu, amalitha hhayi ngaphansi kuka-100. Abazalanisi bathi elikhulu yezinyoni, sikhulu ufudu zikhule. Kungcono ungathathi aquarium okusezingeni eliphezulu futhi ububanzi futhi uhlele it in an island komhlaba, ngokuvamile okuthatha ingxenye yesithathu yonke indawo. Ngenxa yalezi zinjongo kuvunyelwe ukusebenzisa itshe elikhulu nge imiphetho ezitshekile futhi Driftwood enhle.
Ukuze uthole khona okuntofontofo e-terrarium kufanele usethe:
isibane amalahle emoyeni, okuyinto ogibele esiqhingini;
UV isibani, okuyinto edingekayo ukuze ulondoloze impilo;
Okuhlungayo umshini ohlanza amanzi, okuyinto igcina yezinyoni ehlanzekile;
phansi ekhethekile phansi, enika ukufana ne phansi echibini;
izimila zasolwandle ezidliwayo, ukuze bug egade bangadla kiyo.
Ungakhethi ukukhula ulwelwe ngamandla okukhulu, kungenjalo bayokudla luthathe isikhala yonke we terrarium.
Ingabe ngidinga ushintsho amanzi
Amanzi terrarium okufanele kuhlale kuhlanzekile kugcinelwe. Ngokwengxenye babhekane nalesi lemifanekiso, kodwa ukushintsha amanzi njalo ukuze uvimbele ukuthuthukiswa izifo. Qedela esikhundleni yamanzi futhi yokuhlanza izindonga yezinyoni aphethwe njalo ezinyangeni 1-1.5, futhi ngokwengxenye - njengoba kudingeka. Ukuqinisekisa ukugcinwa kwesikhathi eside ubumsulwa yezinyoni, kufanele inikezwe ukudla isilwane ngaphandle, futhi musa ukondla ngqo emanzini ixhaphozi ufudu. Ukuze ugcwalise ethangini ukuvikela amanzi kampompi kufanelekile.
Ingabe Ngidinga basebusika ufudu
European Echibini ufudu ku yokucashisa zasendle ebusika. Lokhu abakudingayo ukuze ukubambezela yonke izinqubo umzimba emzimbeni, njengoba ezihuquzelayo - abandayo yokudalwa hhayi bayokwazi ukuqondisa ukushisa.
Ekhaya, kulondolozwe izinga lokushisa kwamanzi njalo futhi emoyeni, ngakho asikho isidingo ukuhlela izimfudu basebusika. Abanye abalimi abanolwazi bakholelwa ukuthi inqubo enjalo ingase ilimaze ezifuywayo, ngaphandle kunzima ngempela ukuhlela.
Uma wazi izimiso wokunakekela izilwane, kanjani futhi yini ukondla marsh ufudu, lokhu kuzosiza ukuvimba lokho okuqukethwe amaphutha ezingalimaza isilwane sakho. Khona-ke isilwane esihuquzelayo kuyoba umnikazi wenkampani iminyaka eminingi, mhlawumbe kuze nokuguga. Phela, izimfudu European kukhona isikhathi eside futhi kungaba aphila iminyaka engaba ngu-80.
Yayiyini ngokwedlulele kunazo Porsche 911?